Iko kupi kwekutarisa Vazukuru: Iyo Royal Muchato online? Disney Plus, zuva rekuburitsa, ruzivo rwekushambadzira uye zvimwe - Pop-Tsika
Iko kupi kwekutarisa Vazukuru: Iyo Royal Muchato online? Disney Plus, zuva rekuburitsa, ruzivo rwekushambadzira uye zvimwe
TV yakasarudzika Dzinza: Iyo Royal Muchato yakatangwa paDisney Channel munaAugust 13 na9: 40 pm ET. Chikamu che Disney '' Descendents franchise, iyo TV yakasarudzika yaive naMal naMambo King wemuchato wamambo.
Kuburitswa kweanoratidzirwa ficha kwaiitirwa chete kune Disney Channel. Fans, zvisinei, vakakwanisa kubata Descendants animated maficha pane ekumhanyisa mapuratifomu senge fuboTV, Sling TV, Hulu With Live TV uye zvakawanda.
Mal naBen pakupedzisira vanove nemufaro wavo mushure me ❤️ Ndeipi yaive nguva yako yaunofarira kubva #DescendantsRoyalWedding ? #DisneyDescendants pic.twitter.com/WyTgFgfm2g
- Disney Channel (@DisneyChannel) Nyamavhuvhu 14, 2021
Vataridzi muUSA vachiri kungotarisa yakasarudzika yeTV kuburikidza neanodzokorodza yeDisney Channel kana kuburikidza nekushambadzira TV masevhisi.
Dzinza: Zvese nezve kusvika kweRoyal Muchato paDisney +
Dzinza: Muchato weRoyal (Mufananidzo kuburikidza neDisney Channel)
Vazukuru: Muchato weRoyal wakaburitswa paDisney Channel neChishanu, Nyamavhuvhu 13, ichangopera Disney Channel bhaisikopo rekutanga Spin. Mushure mekuratidzwa kwayo kwekutanga paDisney Channel, chimiro chemhuka chinotarisirwa kudonha paDisney + munguva pfupi.
Zvisinei, hakuna kumbove nekuziviswa kwepamutemo maererano nezuva rekuburitsa. Nekudaro, mafeni anofanirwa kumirira kwenguva yakati rebei.
Vachazoberekerwa: Muchato weRoyal uchawanikwa mahara pamutengo paDisney +?
Izvo hazvidzivirike kuti Descendants yakakosha inosvika pane Disney's OTT chikuva munguva pfupi inotevera. Nekudaro, vatariri vanofanirwa kutenga kunyoreswa kuDisney + kuti vawane zvirimo.
Kunyoreswa kweDisney + kunodhura kutenderera $ 7.99 / mwedzi iyo ichavhura zvakawanda zvemukati papuratifomu yeOTT. Nekudaro, kuti uwane makuru ekuburitswa senge Chirikadzi Nhema , vatariri vachatobhadhara imwezve $ 29.99 yekuwana premium.
Inzwi rinodzikwa reVazukuru: Muchato weRoyal
Inzwi rinodanwa reVazukuru: Muchato weRoyal unoumba nhengo dzinotevera:
Njiva Cameron saMal
Sofia Carson saEvie
Booboo Stewart saJay
Mitchell Tariro saBen
China Anne McClain saUma
Jedidiah Goodacre seChad Charming
Anna Cathcart saDizzy Tremaine
Sarah Jeffery saAudrey
Bobby Moynihan saDude iyo Imbwa
Melanie Paxson saMai Vanamwari Vanamwari
Dan Payne seChikara
Keegan Connor Tracy se Belle
Cheyenne Jackson saHadhesi
Faye Mata saMaleficent
Jack Venturo sePain
Ryan Garcia sePanic
Dzinza raVazukuru rakawana zita raro kubva kumuchato wamambo waMal (Njiva Cameron) naBen (Mitchell Hope). Iyo yeTV yakakosha ine zvakawanda zvezvipingamupinyi, uye kutyisidzira kwakasiyana kwakapotsa kwakanganisa muchato.
Kunze kwenguva inonakidza, vaDescendants: Muchato weRoyal wakaratidza zvakare kusanzwisisika kwaCarlos (mutero kuna mushakabvu Cameron Boyce).
anogara achindinyorera achindidzosera asi haatombondinyorera
sei ndine mafeelings kwaari
maitiro ekuita kuti bf yako ikuremekedze
zvekuita kana mukomana wako achinyepa kumeso kwako
ane val kilmer ane cancer
kudzosa sei imba yako
sei murume wangu achigara akanditsamwira